ဥာဏ်မမှီသူ မိန်းကလေးကို တပ်သားက အဓမ္မကျင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဥာဏ်မမှီသူ မိန်းကလေးကို တပ်သားက အဓမ္မကျင့်
ဥာဏ်မမှီသူ မိန်းကလေးကို တပ်သားက အဓမ္မကျင့်
Posted by ဂျစ်စူ on Nov 18, 2010 in Myanma News | 12 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့က ရေနံချောင်းမြို့၊ ညောင်လှရပ်ကွက်က အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် ဥာဏ်ရည်မမှီတဲ့ မိန်းကလေးငယ်တယောက်ကို ခလရ ၇၇ တပ်ရင်းက တပ်သား မောင်မောင်ချေ ကိုယ်ပိုင်အမှတ် (တ-၃၃၆၂၁၈) က အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တာကို ဥပဒေအရ အရေးမယူပေးသေးဘူးလို့ မိသားစုဝင်တွေက ပြောပြပါတယ်။
မြို့ပြင်နွားစားကျက်မှာ တူမလေးတယောက်နဲ့ အတူတူနွားကျောင်းနေတုန်း တပ်သားမောင်မောင်ချေက အဓမ္မပြုကျင့်တာကို အော်ဟစ်အကူညီတောင်းတာကြောင့် ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေက ၀ိုင်းဖမ်းပြီး ရဲစခန်းခေါ်သွားတဲ့အခါ၊ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်နေတုန်း တပ်က အရာရှိတွေက သူတို့ တပ်သားကို ပြန်လာခေါ်သွားပြီး အခုထိ အရေးယူတာ မရှိသေးဘူးလို့ မိန်းကလေးရဲ့ အမက ပြောပါတယ်။
ဆေးရုံဆေးစစ်ချက်တွေအရ မုဒိန်းမှုမြောက်နေလို့ ပုဒ်မ ၃၇၆၊ ပုဒ်မ ၅၁၁ တို့နဲ့ ညောင်လှရဲစခန်းက အမှုဖွင့်ပေးထားပြီး တပ်စည်းကမ်းတွေအရ အရေးယူဖို့ တပ်ကိုလွှဲထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တပ်က အရာရှိတွေက ကာယကံရှင် မိန်းကလေးရဲ့ မိဘတွေကို ငွေ ၃ သိန်းကနေ ၄ သိန်းအထိ ပေးပြီး ကျေအေးပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းပေမယ့် မိဘတွေက ဥပဒေအရသာ အရေးယူပေးစေချင်လို့ ငွေကို မယူဘူး၊ တရားဥပဒေအတိုင်း မလုပ်ပေးရင်တော့ အထက်အဆင့်ဆင့်ကို တိုင်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ခွေး မျိုး တွေ မုဒိန်းတပ်
ပြောတော့ အမေစု နိုင်ငံခြားသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျ တာကို လူ မျိုးရေး ဘာသာရေး မျိုးရိုး ဖျက်တယ်ဆိုပြီး ဖော်ဝဒ် မေးလ် တွေတောင်လိုက်လုပ်နေတယ်
ပြီးတော့ အမျိုးကောင်း သမီးတွေကိုဖျက်စီးနေတယ်
-ါ ခန်းပိုင်ရှင်အနှိပ်ခန်း ပိုင်ရှင် KTV ပိုင်ရှင်ကြည့်တော့ တပ်က ကတော် အမျိုးသမီးရေးရာက
တပ်သားက ရွာတွေမှာ မုဒိန်းကျင့် အရစ်နဲ့ကောင်တွေက ရပ်ကွက်ထဲ မုဒိန်းကျင့် အပွင့်လေးတွေက အနှိပ်ခန်းနဲ့ktv မှာမုဒိန်းကျင့် အပွင့်ကြီးတွေက မော်ဒယ်တွေ မင်းသမီးတွေကိုမုဒိန်းကျင့်
တကယ်ကို မုဒိန်းတပ် အစစ်
နိုင်ငံခြားရောက်စစ်သား အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပွါး အပြင်မှာခိုးစား တာရှိသေးတယ် ပီးတော့ တာဝန်မယူ
သူတို့သမီးတွေ မိန်းမတွေကျတော့ လဲ အမျိုးကောင်း သမီး လို့ပြောရအောင် ကလပ်တက် ဆေးလိပ်လက်ကြားကမချ
ကြိုက်တဲ့ အဆိုတော် ကောင် တွေ မင်းသားတွေ ကိုငွေပေးပျော်ပါး
ပါမစ်ရဖို့ မွေးရာပါနဲ့ လာဘ်ထိုးဖို့ ဝန်မလေးသူတွေ
သူ့ မယား ကိုယ့်မယား ပတ်ဝိုက် နေတာလဲ ရာထူးကြီးငယ် ကြောင့်ငြိမ်ခံ
အဟီး…. ကြယ်လေးကတော့ ဆော်တယ်ဟေ.. ဒဲ့တွေချည်းပဲ.. မောင်ဒဲ့ ဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုတောင်လွှဲပေးရမလိုဖြစ်နေပီ.. အဟီး
ဗိုလ်လောင်းတွေကတော့ သင်တန်းသားဘဝမှာကတည်းကိုက သောင်းကျန်းကြတာလေ.. ရုရှားကကောင်တွေကတော့ သူတို့ကိုသူတို့ နားထင်သွေးရောက်ပြီး အွန်လိုင်းကနေကြူ.. ဟိုမှာလဲခိုးစား ပေါ်တင်စား.. ဒီကကောင်မလေးတွေကလည်း အဟုတ်တွေမှတ်.. ပြီးရင် မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာစား..ှ. ဒါတွေပါပဲ..
အခုဗိုလ်လောင်းဝင်လျှောက်တဲ့သူတွေမေးကြည့်… ဘာအတွက်လျှောက်တာလဲလို့… ဘာမှရေရေရာရာမရှိ.. အများယောင်လို့လိုက်ယောင်.. ဆော်ကြောင်လို့ကောင်းအောင်လျှောက်…
တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးကိုမတွေး… ငါ့မိသားစုကောင်းစားရေးနဲ့ ငါမယားကောင်းကောင်းရရေး အတွက် သူဌေးသမီးရအောင်ယူပြီး အရင်းအနှီးထူမဟဲ့ဆိုတဲ့ ငါ့ဘို့ကြည့်တဲ တစ်ဘို့ထဲအတွေး…
ပြည်သူတွေကတော့ ခံ ပေ တော့….
အင်း ဒီသတင်းအမှန်ဆိုရင်တော့ အတော်မိုက်ရိုင်းတာဘဲ……. သာမာန်မိန်းကလေးတောင်မဟုတ်တဲ့ ဥာဏ်မမှီတဲ့ မိန်းကလေးကို ကျင့်တယ်ဆိုတော့ ဒီကောင်တော်တော်အောက်တန်းကျတယ်လို့ပြောရမယ်…… ကြားဘူးပါတယ်….. ရန်ကုန်မြို့၊ ဘားလမ်းမှာ ရှိတဲ့ အရူးမလေ ဘယ်သူက ဘယ်လို ဟိုဒင်းဟိုဝှာပြုသွားတယ်မသိပါဘူး…… ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့။ ဟော မွေးချိန်လည်းတန်ရော မွေးပါလေရော ဘယ်မှာလဲ အဖေ။ အမေက ရူး အဖေကဘယ်သူမှန်းမသိ စာနာကြည့်ပါဗျာ…… လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေ မရှိကြတော့ဘူးလား…. စိတ်ပေါ့သွပ်သူဆိုတာ ဘာမှတွေးမိမှာ မဟုတ်ဘူးလေ….. ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့က ဥာဏ်ရည်မှီကြတဲ့သူတွေပါ……. ဒါမျိုးအလုပ်ဆိုတာ ယောင်လို့တောင် မတွေးမိကြပါစေနဲ့….. အဲဒီလုပ်ရက်ဟာ လုံးဝလူမဆန်ပါဘူး လို့ ပြောချင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကြယ်လေးလည်းမှန်တယ် ။ မောင်ဒဲ့လည်းမှန်တယ် ။
ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးဒါမျိုးတွေလုပ်နေတာ တစ်ပုံကြီးပဲ တော်တော် မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်နေရင် သူများသားသမီးကိုမပြစ်မှားပဲ အခပေးပျော်ပါးတဲ့နေရာတွေသွားပါလား အခုတော့ဖြင့်ခွေးကျင့်ခွေးကြံ မိုက်ရိုင်းတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်တယ် ။ ကျမသာ ကလေးမလေးအမေနေရာမှာဆိုရင် အဲ့ဒီတဏှာရူးကို စီးတဲ့ဖိနပ်နဲ့ အားရအောင်ပါးရိုက်ခဲ့မိမှာပဲ ။
ရရှားရောက်တဲ့ကောင်တွေကလည်း အတူတူပဲ ဟိုရောက်ရင် ဘ၀မေ့ပြီး ကမြင်းကြောထနေကြတာ အေကိုက်လို့ပြန်လာတဲ့ကောင်တွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပဲ ။ ပြင်ဦးလွင်က အကောင်တွေဆိုလည်း ထမင်းဆိုင်က အလုပ်သမတောင်မချန်ဘူးပတ်ကြောင်တာ … အရိုးရရ အသားရရ ချူစားတာ ရှက်တတ်ရင်လဲသေဖို့တောင်ကောင်းတယ် ။ ပြီးတော့မှ ပိုက်ဆံပိုက်သမက်လိုက်ဝယ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်သမီးတွေနဲ့ ယူပြီး ဖြတ်လမ်းက ဘ၀မြင့်တင်ကြတယ် ။
ထွီ.. လူယုတ်မာ..ကိုကြယ်လေးလိုလူမျိုးဆို တာဝန်ယူမှာ သေချာတယ်.. ဟိုကောင်တွေနဲ ခင်ဗျားကို မနှိုင်းရက်ပါဘူးဗျာ…
ထွီ လူယုတ်မာ ကိုကြယ်လေးတဲ့
ကောင်းတယ် ။တိုင်ဟုတ်တယ် ပိုက်ဆံပေးလိုရမှန်းသိရင် ဒင်းတို့က မလွယ်ဘူး။ အားပေးတယ်။
ထွီ.. လူယုတ်မာ..ကိုကြယ်လေးလိုလူမျိုးဆို တာဝန်ယူမှာ သေချာတယ်..တဲ့
ကိုကြယ်လေးဆိုရင်လည်း ဒီလိုလုပ်ပါ့မလားဆို တော်သေး။းD
ကျနော်လဲသူ့ကို သတိရတယ် တိုင်းပြည့်ကျေးဇူးရှင်အမောင်စစ် စစ်ရေ~~~~
ဝင်ဆဲပါအုံး မင်းဘော်ဘော်တွေကို welcome our village
ဟုတ်တယ် တိုင်းပြည့်ကျေးဇူးရှင်အမောင်စစ်သည် (ခွေးသူတောင်းစားမျိုး)
ကိုယ်အမျိုးယုတ် သတင်းကို ၀င်ပြီး comment မေ၇းတော.ဘူးလား။
အမျိုးယုတ် ချင်းတူတော. အကြောင်းသိတွေပေါ.။